Tweets Celebrity Endorsement Tweets waa halkaan! | Martech Zone
Tweets Celebrity Endorsement Tweets waa halkaan!
Axad, Sebtembar 20, 2009 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Douglas Karr
Ma taageerida dadka caanka ahi shaqeeyaan? Haa, way sameeyaan. Haddii kale, ma arki doonno xayeysiis maalin walba dad caan ah, miyaynnu arki doonno? Heshiiska oggolaanshaha Catherine Zeta-Jones ee T-Mobile ayaa la sheegay inuu ku kacay 20 Milyan. Ka dib, iibka qaranka ee T-Mobile ayaa kor u kacay 25% intii lagu jiray ololaha. Taageerada Celebrity hadda waxay ku taal Twitter, sidoo kale!
Maxay u shaqeysaa xayeysiinta caanka ah?
Xayeysiinta caanka ah waxay ka shaqeysaa 3 heerar kala duwan:
Aqoonta - waxaan aragnaa boqollaal xayeysiis ah maalin kasta, marka awoodda lagu kala duwanaan karo xayeysiintu waa furaha oo dadka caanka ah ayaa bixin kara taas. Catherine Zeta-Jones ayaa hubaal ka dhigtay dadka inay fiiro yar ka yeeshaan wiilka Verizon!
xaasidnimo - waxaynu nahay bulsho wadata (gacmeed) himilooyinka hodanka iyo sumcadda ayaa saameyn nagu leh. Inaad aragto qof aan rajeyneyno inaan lamid noqonno ama aan soo jiidanay waa xeelad xayeysiin xoog leh. Shaki kuma jiro in Ashton Kutcher iyo Oprah Winfrey (taah) ay malaayiin isticmaaleyaal ah u kaxeeyeen Twitter… hadda waxay ku samayn karaan xoogaa lacag ah!
Sumcad xumo - in loo aqoonsado ganacsi sumcad leh ayaa fure u ah kobaca ganacsiga. Macaamiisha marar dhif ah ayey ganacsi kale kula ganacsadaan ilaa ay ku kalsoonaadaan in ganacsigu sharci yahay. Ogolaansho caan ah ayaa hubaal xawaareyn karta waqtiga ay ku qaadaneyso ganacsigaaga in loo arko mid sumcad leh.
Iyadoo la bilaabayo Tweets kafaala qaaday, waxaad ka iibsan kartaa tweets-yada la kafaala qaaday nidaamka Izea. Kaftan halkan malahan - waxaad kaheli kartaa qofkasta min Kim Kardashian ilaa Bob Vila! Waxaan saxeexay maanta oo waxaan haystaa qiimo jaban oo ah $ 25 halkii tweet. Waxaan u maleynayay inay taasi caadi tahay… marka la eego in sicirka qiimaha Kendra uu aad u badan yahay in lagu daabaco goobta! (Ma hubo in Kendra uu wado iibinteeda e-Buug or kordhinta taraafikada ilaa baloogga) dig Waan isku milmayaa.
Sidee Loo Shaqeeyaa Tweets
Tags: xayeysiinta caanka ahtweets kafaala qaadayTwitter
Ma Quudineysaa 3-da Hab ee Barashada?
Isku-darka badhannada Retweet-ka ee ku jira Blog-kaaga WordPress
Sep 21, 2009 at 5: 11 PM
Fikradaha xiisaha leh DK. Kaliya waxaan u maleeyay inaan xuso qaar ka mid ah cilmi baaris xiiso leh oo taageerta taageerida dadka caanka ah. Inta badan asalka aragti ahaaneed wuxuu ka yimaadaa warqad seminal ah oo ku saabsan qancinta aadanaha oo ay daabaceen Richard Petty iyo John Cacioppo oo ku saabsan Elaboration Likelihood Model. Sheegashadooda ayaa ah inay jiraan laba dariiq oo aasaasi ah oo lagu qanciyo maskaxda, bartamaha iyo durugsanaanta (oo loo maleynayo inay u xuubsiibteen sidii farsamo maskaxeed oo looga hortagi karo macluumaadka xad dhaafka ah). Xudunta dhexe waa dood macquul ah waxaana lagu shaqeeyaa ilaha maanka oo buuxa halka durugsanaanta ay tahay habka maskaxda ee sameynta nooc ka mid ah "gudbinta" xukunka noocyada kala duwan. Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah in waxyaalaha go'aamiya sida aan ugu xukunno xukunka si shaqsi ahaaneed loo socodsiiyo ay inta badan go'aamiyaan soo jiidashada aad u qoto dheer ee aadanaha - sida da'da, rafcaanka galmada, xaaladda caanka ah, ama faa'iidada shaqsiyeed Waxyaabo aad u xiiso badan runtii, oo waxaa jira daraasado badan oo cilmi baaris ah halkaas haddii adiga ama akhristayaashu aad rabto inaad fiiriso.